Fanehoan-kevitra manoloana ny tranga kolikoly ahiana amin’ny fanomezana tsenambarom-panjakana eo amin’ny fanaovana pasipaoro biometrika malagasy ho an’ny orinasa SEMLEX
FAMPITAMBAOVAO Fanehoan-kevitra manoloana ny tranga kolikoly ahiana amin’ny fanomezana tsenambarom-panjakana eo amin’ny fanaovana pasipaoro biometrika malagasy ho an’ny orinasa SEMLEX Antananarivo, faha 10 septambra 2020 Omaly, 9 septambra 2020, ny OCCRP – Organized ...
Ampiharo ny fangaraharahana sy ny fanjakana tsara tantana dieny mbola tsy rava tanteraka ny fitokisan’ny olompirenena.
FANAMBARANA AN-GAZETY AVY AMIN’NY FIRAISAMONIM-PIRENENA Ampiharo ny fangaraharahana sy ny fanjakana tsara tantana dieny mbola tsy rava tanteraka ny fitokisan’ny olompirenena. Hatramin’ny fiandohan’ny ady amin’ny valan’aretina Covid 19 teto Madagasikara, izahay firaisamonim-pirenena ...
CNPE sy TI-MG: Miara-miady amin'ny kolikoly sy ny fandripahana ny harena voajanahary
Anisan'ny sehatr’asa tena hanjakan'ny kolikoly ny tontolon'ny harena voajanahary eto Madagasikara. Manondrana sy mandripaka (ala, harena ankibon’ny tany sy andranomasina, sns.), manao kolikoly avo lenta ary mambotry firenena ireo olondratsy, ...
Torohay ho an'ny olom-pirenena iadiana amin'ny kolikoly ao anatin'ny vanim-potoanan'ny covid-19
Tsy hita maso ny kolikoly, tahaka ny covid-19. Samy miteraka voka-dratsy eny anivon'ny fiarahamonina avokoa anefa ireo. Voakasika mafy i Madagasikara. Tsy maintsy ampitomboina, araka izany, ny ezaka hahafahana mandresy ...
Andeha isika hiara-hiady amin’ny kolikoly !
Transparency International – Initiative Madagascar (TI-IM) dia Fikambanana Malagasy tsy miankina amin’ny fanjakana, niorina tamin’ny taona 2000, miasa ho an’ny fampiroboroboana ireo fitsipika tokony arahina sy mendrika ary mangarahara eo anivon’ny olom-pirenena eo amin’ny fiarahamonina. Solotenan’ny vondrona iraisam-pirenena Transparency International ny TI-IM, izay fikambanana lehibe indrindra miady amin’ny kolikoly avy amin’ny fiarahamonim-pirenena.
IREO AHAFANANA MIFRANDRAY AMINAY
CITÉ PLANTON Lot II U 86 (rez-de-chaussée)